Solution Cleaner - Popular Jewelry
Ngwọta Ọcha ọcha
Ite ọ bụla nwere:
8 oz (237 mil) nke nhicha ọcha (acidified thiourea solution)
1 x ngwugwu nkata
Kwupu isi ya nke ọma ka ịzere itisa.
Weghachite ngwa nkata site na nnukwu ma kpuchie iberibe ị chọrọ ihicha n’elu.
Wedata ngwongwo nkata n'ime ihe ngwọta, na-eme ka ọlaọcha ọlaọcha juputara na nhicha.
Chere 10-20 sekọnd, dabere n’otú e si etinyere ọla / mebiri emebi.
Welie nkata ahụ ma kwe ka ihe nhicha dị ọcha na-agbapụta azụ n'ime ite ahụ.
Jiri mmiri sachaa ọla ọcha ndị ahụ.
Acidified thiourea bụ nke na-emebi emebi ma mebie ọla a hapụrụ n'ime ogologo oge.
Acidified thiourea bụ carcinogen mara.
* Ntụziaka ndị ọzọ gụnyere na ite ahụ.